Sidii baa Ducaaloow biyaha, loo dawariyaaye,
Sawirkaasi waa kii taagnaa 1960kii ilaa 1969kii, markii ay ciidammadu taladii dalka qoriga ku maroorsadeen.
Halkan waxa soo gelaya in ay ku kala qaybsamaan oo ay ku kala duwanaadaan dawladaha yar-yar iyo quwadaha waaweyn ee ujeeddooyinka caalamiga ah lihi. Dhaqanka iyo aaminaadda qudhooda waa lagu kala duwanaan karaa, oo dadka qaar in muwaadiniinta la daba-galaa waa u xalaal, qaarna waa wax akhlaaqiyaad u diidaa ay jiraan oo ay ummad ahaan u aamminsan yihiin.
(Waxa weli idiin socda Xeerkii Nabadgelyada ee SNM ee 1988kii)
1. Ka-hor-tegidda, kharbudaadda cadowga, qabashada basaasiinta, adeegayaashiisa iyo u-gudbintooda hay’adaha Xeer Ilaalinta,
2. Is-kaashiga iyo kala-qayb-qaadashada Waaxaha Ciidammada sahanka fog,
3. Samaynta iyo ilaalinta xidhiidhada gudaha ee hawlaha nabad-sugidda khuseeya,
4. Wada-shaqaynta & war-is-dhaafsiga Hay’adaha nabad-sugideed ee saaxiibka lala yahay,
5. Diiwaan-gelinta dhammaan xubnaha muhiimka ah & daaquudyada u shaqeeya Taliska Siyaad Barre,
6. Diiwaan-gelinta xubnaha iskood Ururka uga baxay, kuwa laga saaray, kuwa cadowga u gala iyo la-socodka dhaqdhaqaaqyada si la isu hor taago wixii waxyeello ay Ururka ku keeni karaan,
7. La-socodsiinta Guddoomiyaha & Guddida Fukinta xaaladda nabadgelyada Ururka si joogto ah,
8. Guud ahaan la-socodka xeryaha Qaxootiga si aanu cadowgu ugu soo dhex darsan basaasiin,
9. Ka-hor-tagga dacaayadaha af iyo qoraalba leh ee wax loogu dhimayo jiritaanka Ururka iyo xubnihiisa,
10. Ka-war-qabka & hubinta nabadgelyada waddooyinka wax u soo maraan Ururka,
11. Ilaalinta siraha Ururka,
Maxamed Ibraahin Warsame Cabdi Yuusuf Ducaale
Guddoomiyaha Guddida Joogtada Xoghayaha G/Dhexe iyo G/Joogtada
Bal hadda immikana aynu guud-mar kooban ku samaynno maamulladii u kala danbeeyay Somaliland iyo waxyaabihii ay ka qabteen Xafiiska ‘CID’-da iyo Sir-doonka
Qaranka ee Somaliland. Idinka oo raalli iga noqon doona, ma aha baadhis qoto-dheer bal se si sar-ka-xaadis ah oo aan qoto dheer lahayn ayaan idiin ku soo gudbinayaa.
Maamulladii Somaliland iyo Sir-doonka:
Maamulkii Mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali (Tuur): 1991kii-1993kii
Muddadan ama xilligan kala-guurka ahaa, 18/5/1991kii-18/5/1993kii, ee uu Cabdiraxmaan Axmed Cali oo loo yaqaannay Tuur hayay hoggaaminta SNM iyo dalkaba, wax badan oo qabsoomay ma jirin. Waxay ahaayeen laba sannadood oo kala-guur ku suntanaa oo ku dhammaaday dagaallo iyo colaado sokeeye oo la eeday oo aan la mahadin. Nasiib-wanaag waxa qabsoomay Shirkii Nabadaynta ee Sheekh oo lagu go’aansaday Shirweynihii Guurtida ee 1993kii ku qabsoomay Boorame.
Maamulkii Mudane Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal: 1993kii-2002dii
Madaxweyne Cigaal waxa lagu doortay Shirweynihii Boorame iyada oo la siiyay laba sannadood oo ku-meel-gaadh ah oo ay ahayd in uu Dastuur Qaran ku diyaariyo. Ma ay dhicin, waxaana loo kordhiyay muddo 18 bilood ah oo kale. Iyada oo ay hawlo badani qabsoomeen, waxaynu halkan uga gol leenahay maxaa laga qabtay hay’adaha Amniga.
Intii uu Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal talada dalka ahay waxa dhismay: Ciidammadii booliska, asluubta iyo ciidanka qaranka. Maamulkaa Cigaal waxa kale oo uu culayska saaray dhismaha Laanta Denbi-baadhista ee loo yaqaanno CID’-da. Maa daama uu Cigaal madax ka ahaan jiray maamulkii Soomaaliya xilliyadii uu Ra’iisal Wasaaraha ahaa, wax la yaab leh ma aha in uu dhiso booliska iyo weliba laanta ‘CID’-da.
Cigaal, waayo-aragnimo badan oo door ah ayuu u lahaa dhismaha dawladeed iyo hoggaaminteedaba, taasina waa ta keentay in uu lahaa dhismihii ugu mudnaa uguna horreeyay ee hannaanka dawladnimo, wixii ka danbeeyay 1991kii. Wax la yaab leh ma aha in aanu Madaxweyne Cigaal aad u danaynin dhismaha Hay’ad Sir-doon ma daama uu ka mid ahaa dadkii siyaasiyiinta ahaa ee ugu necbaa nidaamkii keli-taliska ahaa ee Siyaad Barre.
In kasta oo aanay ku koobnaan jirin baadhista denbiyada oo keliya, haddana waxay ahayd ‘CID’-du gacantii uu Cigaal u adeegsan jiray cabbudhinta saxaafadda oo mararka qaarkood xabsiyada loo taxaabi jiray.
Maamulkii Mudane Daahir Ra’ayaale Kaahin: 2002dii-2010kii
Daahir Ra’yaale Kaahin, waa uu ka duwanaa dhammaan Madaxweynayaashii Somaliland soo maray: mid dhintay iyo mid noolba. Iyada oo ay Laantii Baadhista Denbiyada ee ‘‘CID’-du ay iska sii koraysay ayuu ku guulaystay in uu dhiso shebeked Sir-doon oo la yaab leh oo gude iyo dibadba laga dareemay. Taasi mid qiimayntayda qof ahaaneed ku timid ma aha, bal se waa wax duniduba u qirtay.
Waxa loogu wan-qalay Hay’adda Sir-doonka Qaranka. Dad maanta ka mid ah mas’uuliinta Muqdisho ayaa igu yidhi mar ay Hargeysa yimaaddeen, Sir-doonka ugu fiican ee Soomaaliya ka hawl-galaa waa ka Somaliland. Waxa kale oo xusuus gaar ah mudan iyo in hoosta laga xarriiqaba in aanu Sir-doonkaa Daahir Ra’yaale inta badan isku hawli jirin hawlo lagu cadaadinayo shacbiga. Wuxu ku hawlanaan jiray arrimaha la xidhiidha argaggixisada iyo wixii minja-xaabin ah ee Qarankan curdinka ah lagu waday.
Tan macnaheedu ma aha in aan la cabbudhin jirin saxaafadda iyo xorriyatul-qowlkaba. Haa…tasi waa ay dhici jirtay, waxa se inta badan loo adeegsan jiray Laanta Baadhista Denbiyada ee loo yaqaan ‘CID’-da. Daahir Ra’yaale wuxu ku guulaystay in uu sameeyo Sir-doon hawl-gal ah oo gude iyo dibadba isku xidhan. Waxa kale oo la yaab lahaa iskaashigii mugga iyo baaxaddaba lahaa ee uu Sir-doonkaa Qaranku la lahaa dhiggiisa dibadeed: mid goboleed iyo mid caalami ahba.
Ceebta halkan ka muuqatay waxay ahayd in aanay Hay’addaa Sir-doonka Qaranku sharciyaysnayn oo aanay wax Xeer ah lahayn iyada oo haddana si rasmiya u hawl-geli jirtay.
“Intaa waxan ku soo dhaafayaa, dhiilladii hore,” iyo sidii ay maammulladii Somaliland iskaga danbeeyay uga hawl-galeen Hay’adaha “CID”-da iyo sir-doonka Qaranka.Bal hadda immikana si aynu sawir uga qaadanno aan eegno oo oo dhex-qaadno Xeerkii Nabad Sugigga Soomaaliyeed ee Nidaamkii Siyaad Barre, kaas oo aynu ku dhererin doonno Xeerka Sir-doonka Qaranka ee Somaliland.
Jeneraal Maxamed Siyaad Barre oo hoggaaminayay koox saraakiil ciidameed ah, ayaa Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ku qabsaday inqilaab milleteri 21kii Oktoobar, 1969kii. Inqilaabkan millateri oo aanu dhiig ku daadan, ayaa dalka ka dhacay ka dib markii uu ka talinayay nidaam Baarlamaan-ku-sheeg ahaa oo sagaal sannadood xukunka hayay. Maamul aad u liitay oo musuq-maasuq, eex iyo qabyaalad ku sifoobay oo dal iyo dadba khaati laga joogay ayuu ahaa. Koox yar oo reernimo isku hayasatay ayaa talada dalka gacanta ku haysay.
Cabdillaahi Suldaan, mar uu xaaladdii tagneyd sawir ka bixinayay waxa laga hayaa:
“Iyada oo isku huurtayoo,
Ninba meesha uu haysto,
Hudheelkiisii la moodoon,
Xafiis loogu hagaaginoo,
Cidiba soo hor maraynin,
Haybaddii naga duushay,
Cabdillaahi Suldaan, wuxu ka tarjumayaa dareenkii baahay ee shacbiga ahaa ee lagu naawilayay in ay sida roon wax isu beddelaan. Waa tii maansayahnkii Axmed ismaaciil oo loo yaqaannay Qaasim, qudhiisuna saadaasha ka bixiyay ee lahaa:
“Cishadii gashaba waagu waa, caynad gooniyahe,
Anigaa se moorada cakiran, kuu caddayn kara e’,
Cirsan-ka-yeedhkii maantana war buu, sheegay Caliyow e’,
Carruuraha la dhacay awliyada, laga cadhaysiiyay,
Caawaa la kala soocayaa, caabud iyo gaal e’,
Caaddaa rag koray buu nabsigu, hoos u soo celinne,”
Nidaamka bahaloobay wuxu ku soo af-jarmay dilkii bahalnimada ahaa ee Madaxweynihii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed oo 15kii Oktoobar 1969kii nin askari ah oo ilaalinayay ku toogtay magaalada Laas-caanood. Lix maalmood ka dib, iyada oo ay qoyskii talada dalka maroorsaday iyo intii ku xeerreyd ku shirayaan Xaruntii Xisbigii SYL, ayay ciidammadii qalabkii siday ee Xoogga dalka oo uu hoggaaminayay Jeneraal Maxamed Siyaad Barre inqilaab milleteri taladii dalka kula wareegay.
Maansayahankii waddaniga ahaa ee Cabdillaahi Suldaan oo loo yaqaannay Timacadde, mar uu habeenkaa sifaynayay wuxu yidhi:
“Annaga oo habayaaqnayoo,
Meel fog heeryada saarrayoo,
Qeyrkeen hoos ka marriyo,
Hadda oon is-ogeynoo,
Hog dheer laynagu duugaa,
Heddu waa waqtigeedee,
Hoggay Leego (SYL) gelaysay,
Hugun weyni ka yeedhayoo,
Anaa qaadi hoggaankiyo,
Anaa xoolo huraayiyo,
Hayb saran ka dhashay,
Ninba hoygi ku faanayoo,
Hig tidhoy kala yaacdayoo,
Hormaba gees u dullaantayoo,
Heshiis layska dhex waayay,”
Maxamed Siyaad Barre, taladan dalka ee uu qoriga caaradiisa kula wareegay ma ay ahayn mid ku-soo-booddo ah oo habeen uu seexanayay ku dhalatay, bal se waxay ahayd fikrad uu ka baaraan-degay oo uu soo diyaarinayay tan iyo 1967kii sida ay noo sheegeen looga-qaateenkii abaabulkaa wax ka ogaa.
Si uu dalka u maamulo oo uu gacantiisa ugu jiro, wuxu markiiba sameeyay wax uu ugu yeedhay Golaha Sare ee Kacaanka. Garo’ oo inqilaabkii uu talada kula wareegay ayuu asturay oo u bixiyay ‘Kacaan’, bal se ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba kadeed aan ilaa maanta ka hadhin ayuu u ahaa. Golaha Sare ee Kacaanka afka Ingiriisiga waxa lagu odhan jiray ‘Supreme Revolutionary Council’ oo loo soo gaabsan jiray SRC. Golaha Sare ee Kacaanka waxa loo soo gaabsan jiray GSK. Ereygan ‘Kacaanku’ beryodanbe ayuu baxay e’ maalmihii hore waxa la odhan jiray ‘Towradda’. Labada waxa caan-bacay oo ay dadku inta badan ku hadaaqi jireen amaba hal-hays u lahaayeen ‘SRC’-da. Taliskii milleteriga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre si uu taladii dalka gacanta ugu dhigo isla markaana ay ugu suuro-gasho in uu ummadda sas iyo khalkhal ku abuuro, wuxu samaystay Hay’adihii cadaadiska iyo cabbudhinta ee uu ummadda ku san-dulleyn lahaa. Hay’adahaan cadaadiska waxa ugu horreysay oo dhidibbada loo taagay Hay’addii la eeday ee magaca Nabad Sugidda Soomaaliyeed (NSS) lagula kufay, oo markii danbena dadku iyaga oo liidaya ay ula baxeen Ninka Suubban Siyaad (NSS) maa daama Axmed Saleebaan Cabdalle oo hay’addaa madax ka ahaa uu qabay Suubban Maxamed Siyaad Barre.
Xeerkan, aan maanta idiin soo tarjumayo waa markii iigu horreysay ee aan indhahayga saaro. Aniga oo ka soo hawl-galay Xaruntii Xisbiga Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed (XHKS) ee Muqdisho ayay haddana maanta kow ii tahay in aan Xeerkaa Soomaali oo dhan gumeystay markii iigu horreysay arko. Miyaanay Deelleeydii Cabdi Cali Weyd ee ‘Dacawaa cir ku onkoday’ ku jirin tuducan soo socdaa:
Ma aniga iyo cid baa ku seexatay 10 sannadood oo halgan hubeysan ahaa iyo 21 sannadood oo madax-bannaani la haystay ayaa la isku qabsan doonaa Xeer Sir-doon Qaran iyo magacyadii jaan ee ummadda laga xoreeyay.
Sow tii Raage Ugaas lahaa:
“Anuun baa ‘abeed’ lehe rag sow, ima ilaalaysan,
Sow waxaan illobaba nin xumi, ima ogeysiiyo,”
Aynu u soo daaddegno Hay’adda, Xeerkii lagu dhisay iyo ujeeddooyinkii uu Maxamed Siyaad Barre ka lahaa.
Hay’addii Nabad Sugidda Soomaaliyeed ee loo soo gaabsan jiray NSS, waxa lagu dhisay Xeerka lambarkiisu yahay 14 ee soo baxay 15kii Feeberweri, 1970kii. Sharciyayntii Xeerkan waxa lagu ballaysimay, annaga oo soo xiganayna Xeer Lm. 14 laftiisii oo PDF Ingiriisi ku qorani, wuxu ku bilaabmayaa:
Iyada oo la raacayo Amarka Guddoomiyaha Golaha Sare ee Kacaanka, hawl-wadeennada NSS-tu waxay ka koobnaan doonaan xubno laga soo wareejiyay ciidanka Xoogga dalka, Booliska iyo qaybaha kaleba,
Hawl-wadeennada NSS-ta waxa lagu maamuli doonaa, Xeerka Anshaxa ee Ciidammada Xoogga dalka iyo wixii Xeerar kale jira. Xeerarkani waxay dhaqan-gal ahaanayaan ilaa inta Guddoomiyaha GSK Xeerar u gaar ah Hay’dda NSS-ta u soo saarayo,
Hawl-wadeennada NSS-tu iyaga oo aan ‘waaran’ sidan waxay awood u leeyihiin in ay cid kasta qabtaan/xidhaan,
Arrimaha lagu soo qaaday Qodobbada 4aad, 5aad iyo 6aad, waa in iyada oo aan lala daahin ama lala habsaaminba loo gudbiyaa Maxkamadda Badbaadada,
Maxkamadda Badbaadada ee xil-gudashadan u idmani, marka ay hesho ogeysiinta Qodobbadan la xidhiidha, waa in ay soo saartaa oggolaansho ay ku amrayso go’aan-qaadasho kama-danbays ah,
Golaha Sare ee Kacaanku (SRC) wuxu beddeli karaa ama dhinac iska dhigi karaa, iyaga oo dhan ama qayb ahaan arrimaha lagu xusay Qodobbada sare,
Xeerkan gudihiisa waxa ereyadan loola jeedaa:
Hay’adda: Hay’adda Sirdoonka Qaranka (National Intelligence Agency
Agaasimaha Guud : Agaasimaha Guud Hay’adda Sirdoonka Qaranka.
Xubin: qof kasta oo ka mid ah Hay’adda Sirdoonka Qaranka.
Xog qarsoodi ah: xog dabeecad ahaan ama qiimo ahaan xasaasi ah, taas oo
bixinteeda ama sheegiddeeda aan la ogolaani ay khatar ku tahay
ilaalinta amniga iyo danta qaranka.
Xeerkan waxa loogu yeedhayaa Xeerka Hay’adda Sirdoonka Qaranka.
Xeerkan waxa lagu aasaasay Hay’adda Sirdoonka Qaranka (National
Intelligence Agency “NIA”) oo yeelanaysa shakhsiyad qaanuuni ah.
Hay’addu waxay hoos tagtaa Madaxweynaha JSL, waxaanay u gudanaysaa xilka
iyo waajibaadkeeda si madaxbanaan oo Xeerka Waafaqsan .
1. Ujeeddooyinka loo aasaasay Hay’addu waxa ka mid ah:
a. Raadinta,Xuuraaminta (intelligence) xogta iyo wararka.
3 Golaha Wakiilada JSL. Xeerka Hay’adda Sirdoonka Qaranka
b. Ka saadaalinta iyo dabagalka (monitoring) waxkasta oo waxtar u leh
sugida iyo xasiloonida amniga qaranka.
c. Ka hortaga shirqoolada af iyo adinba kaga iman kara cadawga gudaha
iyo dibada oo loola jeedo in lagu wax yeeleeyo laguna wiiqo haybada,
sumcada iyo harumarka qaranka wejikasta ama meelkasta oo ay ku
abaaran yihiin. Kuwaasi oo marka war la hello kadib si aqoon iyo
digtoonaan cuskan loo maarayn karo loona furdaamin karo ama looga
hor tegi karo inta aanay iman hadii ay markaa ciqaab mudantahayna la
d. Ka soo warbixinta meel kasta guddo iyo dibadba iyo cid kasta oo ay u
aragto inay ku lug leedahay ama wado dibindaabyo qaran dumisnimo,
curyaamin iyo wax kasta oo wax yeelo ku ah habsami u socodka
hawlaha qaranka, iyagoo markaa diyaarinaya habkii ama talaabadii ku
haboonayd ee wax lagaga qaban karo arrimahaas.
2. Ka turjumidda, war-bixinta iyo u kuur gelidda guuxa iyo dareenada shacbiga iyo
meel kasta oo ay tabasho ka jirto iyadoo sida ugu haboon warbixin buuxda uga
siinaysa Madaxweynaha arrimahaas si uu go’aanno iyo xal uga soo saaro
Awoodda Hawlgalka Dhulka,Badda iyo cirkaba
Hay’addu waxay awood u leedahay in ay ka hawlgasho dhulka,badda iyo Cirka
Jamhuuiryadda Somaliland ee ku gudo-jira xuduudihiisa caalamiga ah, waxa kale
oo ay ka shaqayn kartaa meel kasta oo ka baxsan xuduudaha dalka, iyadoo la
eegayo danta qaranka, marka loo baahdo.”
Xilka iyo Waajibaadka Hay’adda
Hay’addu waxay leedahay xilalka iyo waajibaadka hoos ku qoran:
1. Ururinta, xuuraaminta, lafo-guridda iyo hufidda xogta ay hesho(intelligence
2. Dabagalka (monitoring) iyo la socodka xaalada amniga guud ee qaranka iyo
xasiloonida dalka iyo dibadaba;
4 Golaha Wakiilada JSL. Xeerka Hay’adda Sirdoonka Qaranka
3. Ka warbixinta khataraha jira ama ku soo fool leh amniga qaranka gudo iyo
4. ka saadaalinta iyo ka warbixinta meel kasta oo ay ka iman karto khatar iyo
waxyeelo qaranka ku iman karta, ka hortaga iyo gacan ku qabashada falal kasta
iyo xad gudub kasta oo ah danbiyo, shirqoolo iyo hadimooyin lagu wax yeelayn
5. dabagalka iyo raadinta xog kasta oo la xidhiidha danbiyada abaabulan iyo kuwa
6. Taageeridda iyo gacansiinta laamaha Dawladda ee qabilsan amniga iyo
Dhamaan meel kasta oo kale oo ay waxtar ka geysan karaan.
7. La socodka iyo dhaqdhaqaaqa Hay’adaha shisheeye.
8. Tira koobka xog u haynta dublimaasiyiintooda (Diplomatic missions).
9. Tiro koobka ajanebiga wadanka ku sugan iyo isla markaana sugida amaanka
cida ku xusan xarfaha G & i.
10.Ka hortaga dacaayadaha (counter propaganda) lidka ku ah haybada,sumcada
iyo sharafta qaran nimada JSL.
11.La socodka qalabyada warbaahinta,qoraalada iyo meel kasta oo ay ku
wajahanyihiin iyo in la hubiyo ujeedooyinka ay xanbaarsanyihiin iyo waxkasta oo
ku duugan (publication press and propaganda)
Hay’addu si ay u gudato xilkeeda iyo waajibaadkeeda waxay leedahay awoodaha
1. In mar kasta oo ay ka war-hesho, ama sabab macquula ah awgeed ku
rumaysato in la qorshaynayo fal-dembiyeed, ay wargeliso hay’adaha
qaabilsan ka-hortagga dembiyada.
2. Xubnaha Hay’addu waxay qaadan karaan hub fudud, si ay isugu difaacaan,
Si waafaqsan Xeerka Hubka fudud.
5 Golaha Wakiilada JSL. Xeerka Hay’adda Sirdoonka Qaranka
3. Hadii ay timaado xaalad degdeg ah (emergence case) waxay awood u
leeyihiin inay halkeeda wax kaga qaban karaan iyaga oo aan cidna u marin
isla markaasna la kaashanaya hay’addaha nabad-gelyada waxaanay la
wareegi karaan qalabkasta oo loo adeegsado danbiyaadaas.
Hay’addu waxay yeelan kartaa qaab-dhismeedkeed ka kooban Agaasime
guud, Agaasime xigeen iyo waaxo, qaybo ama unugyo, oo lagu soo saarayo
Shuruudaha Agaasimaha Guud iyo Ku-xigeenka Agaasimaha
Qofka loo magacaabayo Agaasimuhu waa:
a. In uu yahay muwaadin u dhashay Somaliland.
b. In uu haysto shahaado Jaamacadeed , leeyahayna waaya-aragnimo
maamul iyo khibrad aqoon shaqada loo igmaday oo mudadeedu aanay ka
yarayn 5-10 sano.
c. In aanuu ku dhicin xukun ciqaabeed oo kama danbays ah oo ugu yaraan
saddex sannadood oo xadhig ahi,
a. Mas’uul ka yahay maamulka Hay’adda.
b. Uga warbixiyaa Madaxweynaha shaqada Hay’adda.
c. U gudbiyaa Madaxweynaha xogta iyo war kasta oo taabanaya amniga
d. U gudbiyaa Hay’addaha kale ee amniga Qaranka xogta la xidhiidha
e. Mas’uul ka yahay oo Maamulaa qul-qulka xogta la helay.
f. Mas’uul ka yahay in uu la yimaado hab uu:
i. ku hubinayo in Xubnaha Hay’addu xilkooda u gudanayaan si hagar
ii. kaga hortegayo in xogta hay’addu debedda u soo baxdo.
iii. ku ilaaliyo inaan la sheegin isha xogaha.
iv. ku ilaaliyo in aan la sheegin xubnaha qarsoodiga ah ee Hay’adda.
6 Golaha Wakiilada JSL. Xeerka Hay’adda Sirdoonka Qaranka
v. kaga hortagayo gelitaanka ogolaansho la’aanta ah ee Xarumaha iyo
Xilka Agaasime Ku-xigeenka.
1. Agaasimuhu markuu maqan yahay ama aanu u gudan karin xilkiisa sabab
kasta ha ahaatee waxaa dhamaan hawshiisa fulinaaya agaasime kuxigeenka.
2. Agaasime ku-xigeenku wuxuu qaban karaa xilkasta oo agaasimuhu u
Magacaabista iyo Xil ka qaadista Agaasimaha
Madaxweynaha ayaa leh awoodda magacaabista iyo xil-ka-qaadista Agaasimaha.
Qaabka Shaqo Qorista, Mushaharka iyo Gunnooyinka Xubnaha
Qaabka shaqo qorista, mushaharka iyo gunnooyinka Xubnaha Hay’adda waxa lagu
soo saarayaa Xeer Madaxweyne.
1. Agaasimuhu waxa uu siinayaa Xubin kasta oo ka tirsan Hay’adda warqadda
aqoonsiga (ID Card).
2. Qaabka qoraalka warqadda aqoonsiga, waxa qeexaya Agaasimaha oo ku soo
saaraya qaabkeeda faafinta rasmiga ah.
3. Xubintu waa in ay tusto warqadda aqoonsiga qofka ay ku fulineyso
awoodaha ku xusan xeerkan.
Fal-dembiyeedyada iyo Ciqaabaha
Falalka Ka Reebban Xubnaha Hay’adda
Xubin kasta oo ka tirsan Hay’addan waxaa ka reebban :
7 Golaha Wakiilada JSL. Xeerka Hay’adda Sirdoonka Qaranka
a. In ay si toos ah iyo si dadban toona uga qayb-qaadato dhaqdhaqaaq
b. In ay si aan xeerka waafaqsanayn u gasho ama u baadho goob gaar loo
leeyahay, amaba u qabato hanti hab aan waafaqsanayn xeerkan.
c. Xubinta ku gefta faqradda “a” ee qodobkan waxa abaalmarinteeda loo
raacayaa Xeer-Hoosaadka Hay’adda.
d. In ay qof muwaadin ah ku xadgudbaan xorriyadiisa aasaasiga ah ee
distuuriga ah iyad oo looga faa’iideysanayo dano siyaasadeed”
e. Xubinta lagu helay inay ku geftay faqradda “b” ee qodobkan, waxa lagu
xukumayaa xadhig u dhexeeya 6-bilood ilaa 2-sanadood iyo ganaac aan
ka badnayn 2,000,000/= (laba milyan oo SL Shilling ah).
Xubin kasta oo ka tirsan Hay’adda oo iyada oo ogolaansho ka helin Agaasimaha
Hay’adda sheegta, faafisa, daabacda ama si uun uga dhigta wax la ogyahay;
a. Aqoonsiga qof Hay’adda u ah il-wareed .
b. Xubin Hay’adda ka tirsan oo ku hawlan hawl qarsoon.
c. Xog hay’addu heshay oo xaasaasi ah.
Waxa lagu xukumayaa xadhig u dhexeeya 6 ilaa 10 sano; haddii xogta la bixiyey
ay Qaranka ku keentay khasaare, waxa xubinta bixisay lagu xukumayaa xadhig u
dhexeeya 10 ilaa 20 sanno.
Gelidda Goobaha Hay’adda
Qof kasta oo:
a. gala dhulka ama goobaha Hay’adda,
b. sawir ka qaata dhulka ama goobaha Hay’adda,
isaga oo aan ogolaansho ka haysan Hay’adda, isla markaana si macquul ah loogu
rumaysan karo in gelitaanka goobta ama sawir ka-qaadisteeda laga lahaa in lagu
waxyeeleeyo hay’adda ama qaranka, waxa uu galay dembi, waxaana lagu
xukumayaa 2 ilaa 3 sanadood.
8 Golaha Wakiilada JSL. Xeerka Hay’adda Sirdoonka Qaranka
a. Agaasimaha iyo Xubin kasta oo ka tirsan Hay’addu intaanay shaqada
gelin waxay marayaan dhaartan: “Waxa igu Wallaahi ah, oo igu Bilaahi
ah, inaan daacad u noqdo Qaranka Somaliland, xilkaygana u guto si
b. Agaasimaha Hay’adda Madaxweynaha hortiisa ayaa lagu dhaarinayaa,
waxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamada sare.
c. Xubnaha kale ee Hay’adda waxa lagu dhaarinayaa Agaasimaha hortiisa.
Wada Shaqaynta Waajibka ah
Qof kasta oo deggan wadanka gudihiisa, marka laga reebo diblomaasiyiinta
shisheeye, waxa ku waajib ah in uu la shaqeeyo xubnaha Hay’adda ee gudanaaya
Hay’adda waxaa miisaaniyada Qaranka looga qoondaynayaa miisaaniyad ku filan
oo ay ku fuliso waajibaadkeeda.
Madaxweynuhu, ka dib marka uu la tashado Agaasimaha, waxa uu soo saarayaa
Xeer-nidaamiye lagu dhaqan-gelinayo Xeerkan.
Xeerkani waxa uu dhaqan-gelayaa marka uu saxeexo Madaxweynuhu, laguna soo
saaro faafinta rasmiga ah.
C/risaaq Siciid Ayaanle Baashe Maxamed Faarax
Xoghayaha Guud ee Golaha Wakiilada JSL Ku-simaha Gudoomiyaha, ahna
Gud Ku-xigeenka 1aad ee Golaha Wakiilada JSL.
Xilka Gudoomiyaha Golaha Wakiilada
Gudoomiyuhu wuxu furayaa, xidhayaana fadhiyada, wuxuu sheegayaa saacadaha iyo ajendaha fadhiga soo socda, isaga oo af-ahaana ku war-gelinaya Xubnaha Golaha Wakiilada.
Guddoomiyaha Golaha Wakiiladu wuxuu mas’uul ka yahay fulinta iyo ku dhaqanka Xeer-hoosaadka, ilaalinta nidaamka Golaha iyo habsami u socodka hawlaha Golaha oo dhan.
Gudoomiyuhu wuxuu hadalka u qaybiyaa Mudaneyaasha, wuxu hogaamiyaa doodda, wuxu soo jeedinaya su’aalaha, wuxuu nidaamiyaa habka codaynta, wuxuna ku dhawaaqaa natiijadooda.
Gudoomiyuhu wuxuu kormeerayaa shaqada Golaha iyo hawl-maalmeedka ay qabtaan xoghayntu.
Gudoomiyuhu wuxu matalaa, kuna hadlaa magaca Golaha Wakiilada. Wuxuu xidhiidhiyaa Golaha iyo baarlamaannada adduunka ee dhiggiisa ah.
Haddii Gudoomiyuhu heshiis caalami ah soo galo, wuxu Goluhu ku ansixinayaa heshiiskaas cod haldheeri, (aqlabiyad fudud).
Gudoomiyuhu wuxu saxeexaa heshiisyada caalamiga ah ee Goluhu la galayo baarlamaannada adduunka ee dhigiisa ah.
Gudoomiyuhu wuxu dhaariyaa Xoghayaha Guud, ku-xigeenkiisa iyo la-taliyeyaasha.
Gudoomiyuhu wuxuu saxeexa go’aamada Golaha iyo waraaqaha kale ee rasmiga ah. Marka uu maqan yahay ama uu buko waxa saxeexaya Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha marka labaduba maqan yihiina Gudoomiye ku-xigeenka 2aad ee Golaha.
Gudoomiyuhu wuxu iska leeyahay furista Golaha marka kooramku buuxsamo, iyo xidhitaankiisa hadaan Golaha soojeedin kale ka iman.
Gudoomiyuhu wuxu ahaanaya mid u dhex ah mudaneyaasha marka laga reebo xaalada codkiisa loo baahdo.
Waa qof iyo maankii sida uu u qiimeeyo is-barbar-dhigga labadan awoodood ee Xeer-hoosaadkani kala siinayo Guddoomiyaha Golaha Wakiillada iyo Shir-guddoonka.
Falanqaynta Qodobbo ka mid ah Xeerkan Sir-doonka Qaranka:
Qodobka: 1aad: Erey-bixinta Xeerka:
Faqradda 4aad ayaa ah:
Xog qarsoodi ah: Xog dabeecad ahaan ama qiimo ahaan xasaasi ah, taas oo bixinteeda ama sheegiddeeda aan la ogolaan ay khatar ku tahay ilaalinta amniga iyo danta qaranka.
Faallaynta Qodobka: 1aad, Faqradda: 4aad
Halkan waxa aan caddayn, aan muuqan, aan sugnayn, aan qeexnayn, aan meel oollin oo aan taagnayn oo madmadow badani ku jiraa: Maxaa noqonaya xog qarsoodi ah. Waxa kaaga sii daran, xog dabeecad ahaan ama qiimo ahaan xasaasi ah. Halkan waxa la iska weydiin karaa: dabeecadda iyo qiimaha xogtu waxa ay noqon karaan. Waxa intaas oo dhan ka sii daran marka ay xogtu dabeecad ahaan iyo qiimo ahaan xasaasi noqoto.
Goorma ayay xogtu dabeecad ahaan iyo qiimo ahaan xasaasi noqotaa? Sidee se ay xogtu dabeecad ahaan iyo qiimo ahaan xasaasi ku noqotaa? Tolow, yaa sargooya ee go’aan ka gaadha goorta ay xogtu dabeecad ahaan iyo qiimo ahaan xasaasi noqoto? Hadal waa margi ayaa la yidhi, waana maah-maah Soomaaliyeed oo ilaa aammanuu soo jirtay. Alla, Xukuumaddeennu belaayaysanaa iyada oo aan saddex jirsan ayay durtaba haysataa qalab aanay dawladaha waaweyni haysan oo lagu cabbiro daabeecadaha iyo qiimaha xogta qarsoon ee xasaasiga ah. Sacabka ha loo tumo.
Hay’addani Madaxweynaha ayay hoos imanaysaa, isagana haleelkiisa iyo waqtigiisuba waa ay iska yar yihiin. Sidee ayuu ku ogaanayayaa in ay xogtu dabeecad ahaan iyo qiimo ahaanba xasaasi tahay? Yaa uuga mas’uul noqonaya si uu uga go’aan-qaato? Yaa uuga mas’uul ah in aan Muwaaddiniinta daacadda ah ee dal iyo dadba u shaqaynaysa lagu wanjalayn?
Haddii aanu jirin oo aanu hawl-gal maanta ka ahayn Xukuumaddeen barakaysan hab-dhaqankii iyo caadooyinkii sadhaysnaa ee nidaamkii bahalka ahaa ee Siyaad Barre, maxaa keenay in laga fekero dhismaha Hay’ad Sirdoon Qaran loogu wan-qalo oo ummadda lagu bah-dilo oo aan soo marin jaranjarooyinkii Hay’adaha Qaranka lagu dhisayay. Xataa hanashadii iyo agaasinkii ammaanka ayaanay ku fiicnayn oo ay nusqaan iyo nitaakhaba ku tahay. Hawlaha ammaanka waxa ka go’aan-qaata Hay’adaha ammaanka ee Ciidan Qaran iyo Boolis Qaran leh.
Ujeeddooyinka loo aasaasay Hay’adda waxa ka mid ah:
a. Raadinta, xuuraaminta (intelligence) xogta iyo wararka,
b. Ka-saadaalinta iyo daba-galka (monitoring) wax kasta oo wax-tar u leh sugida iyo xasiloonida amniga qaranka,
c. Ka hortaga shirqoolada af iyo adinba kaga iman kara cadawga gudaha iyo dibada oo loola jeedo in lagu wax yeeleeyo laguna wiiqo haybada, sumcada iyo harumarka qaranka wejikasta ama meelkasta oo ay ku abaaran yihiin. Kuwaasi oo marka war la hello kadib si aqoon iyo digtoonaan cuskan loo maarayn karo loona furdaamin karo ama looga hor tegi karo inta aanay iman hadii ay markaa ciqaab mudantahayna la mariyo,
d. Ka soo warbixinta meel kasta guddo iyo dibadba iyo cid kasta oo ay u aragto inay ku lug leedahay ama wado dibindaabyo qaran dumisnimo, curyaamin iyo wax kasta oo wax yeelo ku ah habsami u socodka hawlaha qaranka, iyagoo markaa diyaarinaya habkii ama talaabadii ku haboonayd ee wax lagaga qaban karo arrimahaas,
Ka turjumidda, war-bixinta iyo u kuur gelidda guuxa iyo dareenada shacbiga iyomeel kasta oo ay tabasho ka jirto iyadoo sida ugu haboon warbixin buuxda uga siinaysa Madaxweynaha arrimahaas si uu go’aanno iyo xal uga soo saaro.
Faallaynta Qodobka: 5aad:
Ma maqli jirteen: “Ku-kaadshe ayaan nin u aqaannaa.’ Waa taa teedii. Car bal waa qofka fahma weedhahan iyo ereyadan xeerka la inoogu soo qoray. Bal Ilaahay ayaan idin ku dhaariyay e’ u fiirsada Faqradda 2aad ee odhanaysa: “Ka-turjumidda, war-bixinta iyo u-kuur-gelidda guuxa iyo dareenada shacbiga iyo meel kasta oo ay tabasho ka jirto iyadoo sida ugu habboon warbixin buuxda uga siinaysa Madaxweynaha arrimahaas si uu go’aanno iyo xal uga soo saaro.”
(Fadlan halkan ka daalaco Xeerka Sir-doonka Qaranka)
Bal idinka ayaan idin weydiiyay e’ sidee ayay hay’addani uga tarjumi kartaa guuxeenna iyo dareemmadeenna. Xaq uma lihin oo keliya in aynu guuxno oo dareen yeelanno, bal se wuxu Dastuurkeennu inoo dammanad qaadayaa in aynu qaababka beni-aadamku isku cabbiraan oo dhan dareemmadeenna ku muujinno. Maxaa looga baahan yahay in ay hay’addan Sir-doonku ‘ka tarjumi karto guuxeenna iyo dareemadeenna’. Miyaynaan dad nool oo is-cabbiri karaya ahayn, mise waxaynu gaadhnay xilligii la inagu rakibi lahaa mishiinno dareemadeenna tarjuma oo af ay Xukuumaddeennu taqaan u roga oo aynaan innagu la garanayn. Bal adba!
Waxaan ka yaabay demmenaanta dadka xeerkan qoray. Xilliyadan aynu nool nahay ma noola. Weli waxay ku jiraan ‘Noomal Kahaf’ iyo xilliyadii wax-saareenka ahaa ee Siyaad Barre. Waxaanu idin ka nidhi: “Cidiba immika ma guuxdo e’ waa la doobyaa oo rakaadda la laba-celiyaa ee taa wax lagu cabbiro ma haysataan.”
Waxa jira wax afka Ingiriisiga lagu yidhaahdo ‘Context’ oo aynu u tarjuman karno ‘xaalad’. Tusaale haddii aynu soo qaadanno waxaynu odhan karnaa Xeerka ina wareeriyay ee ‘Sir-doonka Qaranka’ ‘context-kii’ ama ‘jawigii ama xaaladdii’ lagu qoray maxay ahayd. Xaqiiqadu waxay tahay in dadka qoray aanay ahayn qaar hadda nool bal se ay ahaayeen qaar weli ku jiray xilliyadii madoobaa ee nidaamkii Siyaad Barre.
Waxaad is-odhanaysaa miyaanay Wargeysyada akhriyin? Miyaanay telefishannada daawan? Miyaanay arag inta Baar-qab reeraha ku jirta ee habeeen kasta iyo maalin kasta qaybaha war-baahinta doobta ka ridda? Ma cid baa wax qarsata? Ma daba-gal iyo xuuraan ayaa loo baahan yahay?
Reerku, qofku, kooxdu, ururku, xisbigu, cid waliba waxay berri ku dhaqaaqayso war-baahinta ayay marisaa oo cid wax qarsataa ma jirto. Markaa, maxaa la xuuraamayaa? Maxaa la dhega-dhegaynayaa? Qof baa maanta argaggixiso loo xidhayaa ama hanti- ummadeed oo uu dhacayba. Subaxnimada cid kasta oo ay arrintaasi khusayso oo xukuumadda ka tirsan ilaa Madaxweynaha, waxa albaabbadooda garaacaya reerkii oo isku duuban oo is-wada wata. Ma Wasiirkii baa! Ma Xil-dhibaankii baa! Ma sheekhoodii iyo shariifkoodii baa! Ma Madax-dhaqameedkii baa! Ma Ganacsadihii baa! Ma Indheer-garatadii baa! Bal idinku wada ilaa inta aad ka daalaysaan. Haddii la soo waabiyo wax ma qarsadaan e’, markaaba shir-jaraa’id oo dhagareed ayay ku dhaqaaqayaan oo war-baahinta ka sii deynayaan waxay fali doonaan oo aan been ahayn. Ma dadkaasaa Hay’ad Sir-doon Qaran u baahan oo xuuraanta ama guuxooda dhegaysata. Bal adba!
(Awoodda Hawlgalka Dhulka, Badda iyo cirkaba)
Hay’addu waxay awood u leedahay in ay ka hawlgasho dhulka, badda iyo Cirka Jamhuuiryadda Somaliland ee ku gudo-jira xuduudihiisa caalamiga ah, waxa kale oo ay ka shaqayn kartaa meel kasta oo ka baxsan xuduudaha dalka, iyadoo la eegayo danta qaranka, marka loo baahdo.
Bal hadda Qodobkan 6aad ee Xeerka Sir-doonka Somaliland aan ag dhgno Qodobkii 3aad ee Xeerkii Nabad-sugidda ee Siyaad Barre oo ahaa:
Faallaynta Qodobka: 3aad
Waxa iska cad in aan xeerkan diyaarintiisii curin iyo hal-abuur badan lagu lumin ee xeerarkii kelidii-taliyihii hore si fudud la iskaga soo qaatay. Xeerkii Hay’adda Nabad Sugidda ee maamulkii Siyaad Barre ayaaba ka koobnaa oo ka urursanaa. Annagaa belo aragnay.
Ururinta, xuuraaminta, lafo-guridda iyo hufidda xogta ay hesho (intelligence service);
Dabagalka (monitoring) iyo la socodka xaalada amniga guud ee qaranka iyo
Ka warbixinta khataraha jira ama ku soo fool leh amniga qaranka gudo iyo dibeddaba;
Ka-saadaalinta iyo ka warbixinta meel kasta oo ay ka iman karto khatar iyo waxyeelo qaranka ku iman karta, ka hortaga iyo gacan ku qabashada falal kasta iyo xad gudub kasta oo ah danbiyo, shirqoolo iyo hadimooyin lagu wax yeelayn karo qaranka.
Dabagalka iyo raadinta xog kasta oo la xidhiidha danbiyada abaabulan iyo kuwa argagixisada.
Taageeridda iyo gacansiinta laamaha Dawladda ee qabilsan amniga iyo dhamaan meel kasta oo kale oo ay waxtar ka geysan karaan.
La socodka iyo dhaqdhaqaaqa Hay’adaha shisheeye.
Tira-koobka xog u haynta dublimaasiyiintooda (Diplomatic missions).
Tiro koobka ajanebiga wadanka ku sugan iyo isla markaana sugida amaankacida ku xusan xarfaha G & i.
Ka hortaga dacaayadaha (counter propaganda) lidka ku ah haybada, sumcada iyo sharafta qarannimada JSL.
La socodka qalabyada warbaahinta, qoraalada iyo meel kasta oo ay ku wajahan yihiin iyo in la hubiyo ujeedooyinka ay xanbaarsan yihiin iyo wax kasta oo ku duugan (publication press and propaganda)
Faallaynta Qodobka: 7aad:
Bal hadda Qodobbadan dhex qaada oo wax macno la taaban karo samaynaya ka soo saara. Waxaan magan idiin ka ahay in aad u fiirsataan oo aad hoos u dhugataan faqradda 11aad ee ugu danbaysay ee aan hoosta ka xarriiqay. Bal waxaad ag dhigtaan Qodobbada Dastuuriga ah ee dammaanad-qaadaya xorriyatul qowlka iyo xaqa is-cabbiraadda ee muwaaddiniinta. Hadda xeerkan waxa waqti geliyay oo inta badan inoo qalin-daraaleeyay Gole Wakiillo oo aynu doorannay oo aynu waqti iyo maalba u hurnay. Sidaa ay tahay ayay weliba ku faanaan in ay xeerkan iyagu saxeexeen.
Hay’addu si ay u gudato xilkeeda iyo waajibaadkeeda waxay leedahay awoodaha soo socda:
In mar kasta oo ay ka war-hesho, ama sabab macquula ah awgeed ku rumaysato in la qorshaynayo fal-dembiyeed, ay wargeliso hay’adaha qaabilsan ka-hortagga dembiyada,
Xubnaha Hay’addu waxay qaadan karaan hub fudud, si ay isugu difaacaan, si waafaqsan Xeerka Hubka fudud,
Hadii ay timaado xaalad degdeg ah (emergence case) waxay awood u leeyihiin inay halkeeda wax kaga qaban karaan iyaga oo aan cidna u marin isla markaasna la kaashanaya hay’addaha nabad-gelyada waxaanay la wareegi karaan qalab kasta oo loo adeegsado danbiyaadaas.
Faallaynta Qodobka: 8aad
Marka hore bal Faqradda: 3aad Qodobkan: 8aad ee Hay’addeenna Sir-doonka Qaranka waxaad ku qiyaastaan ama ag dhigtaanba Qodobkan 4aad ee hoosta ku qoran ee Xeerkii Nabad Sugiddii Soomaaliya ee Siyaad Barre. Maxaa iskaga eg!
Waxa la yaab leh labadan Qodob sidaa ayay isu xanbaarsan yihiin iyada oo la wada aamminsan yahay in nidaamyada kala lahaa ab iyo isirba ku kala duwan yihiin. Haddaa maxaa isu ekaysiiyay?
Bal aynu ku dhudhuminno ama ku dhererinnaba Dastuurka Qaranka. Waxaynu soo xiganaynaa Qodobka: 25aad oo ku xusan bogga 18aad ee Dastuurka Qaranka, waxaanu dhigayaa:
Qofna xorriyaddiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn,
Ma bannaana in qofna la qabto, la baadho ama la xayiro haddii uusan markaa denbi faraha kula jirin, ama aanu amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin Garsoore awood u lihi,
Dawladda ayaa muwaaddinka u dammaanad-qaadaysa xuquuqda iyo xorriyadaha. Xeer ayaa qeexaya ciqaabta ka dhalan karta ku xad-gudubkooda,
Dhammaan xorriyaadka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasilloonda dalka ama xuquuqda qof kale,
Xubin kasta oo ka tirsan Hay’adda oo iyada oo ogolaansho ka helin Agaasimaha Hay’adda sheegta, faafisa, daabacda ama si uun uga dhigta wax la og yahay:
Aqoonsiga qof Hay’adda u ah il-wareed,
Xubin Hay’adda ka tirsan oo ku hawlan hawl qarsoon,
Xog Hay’addu heshay oo xaasaasi ah,
Waxa lagu xukumayaa xadhig u dhexeeya 6 ilaa 10 sano; haddii xogta la bixiyay ay Qaranka ku keentay khasaare, waxa xubinta bixisay lagu xukumayaa xadhig u dhexeeya 10 ilaa 20 sanno.
Faallaynta Qodobka: 17aad
Annagaa yaab aragnay ma maqli jirteen. Xeerkan Sir-doonka Qaranka ee aynu ka hadlaynaa waa kan kor ku qoran ee xataa xadaynaya ciqaabta qofka loo geysanayo. Golaha Wakiillada ayaa oggolaaday oo Madaxweynaha ayaa saxeexay. Ma taas oo kale ayaad aragteen. Ma wax ay qabtaan ayay waayeen marka ay xadaynayaan muddada qofka la xidhayo. Bal ka warrama dee, dhabanka iyo gacanta ha isa saarina e’.
Halkaa u dhaafi maayo, waayo wixii intaa ka badan waad ku hafan doontaan. Lexejeclo badan ayaan idin ka qabaa oo indhihiinna ayaan u tudhayaaye, raalli ahaada oo tareenkan halkaa kaga hadha.
Waa Xeer aanay farshaxan iyo farsamayaqaanno helin oo la iska xar-xarriiqay. Wuxu ku qoran yahay af-Soomaali aad u liita oo xataa kii maamulkii Maxamed Siyaad Barre ka liita. Kuma qorna siiqad sharciyeed oo aad fahmi karayso.
(Wada Shaqaynta Waajibka ah)
Qof kasta oo deggan wadanka gudihiisa, marka laga reebo diblomaasiyiinta shisheeye, waxa ku waajib ah in uu la shaqeeyo xubnaha Hay’adda ee gudanaaya waajibaadkooda shaqo.
Faallaynta Qodobka: 20aad:
Bal hadda Qodobka: 20aad ee xeerka Sir-doonka Qaranka ee Somaliland ku dhereriya Qodobka: 7aad ee Xeerkii Nabad Sugidda ee nidaamkii aan la mahadin ee Siyaad Barre. Maxaa iskaga eg! Bal hadda waa kan hoos ku qoran ee isagana ka noolaada.
Bal waxaad aad ugu fiirsataan sida labada qodobba loogu adeegsaday ereyada ah ‘Ergooyinka Diblomaasiyadeed’. Nidaamkii Maxamed Siyaad Barre diblomaasiyiin ayaa u joogtay e’, bal innagana maxaa ina daba dhigay. Mise naawilaadda iyo nayaayirka ayaa inala galay. Wax Diblomaasiyiin lagu sheego waxaynu haynaa oo inala jooga Hawl-wadeennada Xafiiska Ganacsiga ee Itoobiya. Laakiin waxaynu ka wada dheregsan nahay boqollaalka haddii aanay kunba gaadhin ee madow iyo caddaanba leh ee dalkeenna hawlaha Hay’adaha u jooga. Tolow, kuwaasina ma qasban yihiin? Xaggee lagu tiriyay iyagana oo uu Xeerkan Sir-doonku ku og yahay.
Bal ka warrama haddii aynu curin-la’aan iyo hal-abuur la’aan halkaa ka taagan nahay. Waxaynu soo wada raranno oo aynu eedno oo dagaallo mooyaan e’, miyaynaan waxba curin karayn innaga oo xaaladeenna nololeed iyo waayaha aynu hadba ku nool nahay ku sar-goynayna?
Ummaddu waxay heegan buuxa ugu jirtaa in ay dal iyo dadba daafacdo oo nabadgelyadeeda u soo jeeddo. Miyaa illowdeen Degmada Dhoqoshay iyo sidii ay dadweynuhu argaggixisada ugu badheedheen ee ay u soo qab-qabteen iyaga oo dagaal la galay oo naftoodii huray! Ma xeer iyo xaagaan Madaxweyne iyo Gole Wakiillo soo saareen ayaa dirtay. Mise wixii ay kaga fal-celiyeen weerarkii dalkooda iyo dadkoodaba qabsaday “Garashaa ku tidhi yeel.”
Ma qabno in Qodobkan looga gol leeyahay in dadweynaha wax lagu faro, bal se wanjal iyo wajaaf baas ayaa ka soo uraya. Dadku waa heegan, waanay u diran yihiin dalkooda iyo dadkooda ee maxaa laga rabaa? Ma laga yaabaa in dal iyo dadba la nacsiiyo oo wixii ay soo sheegi lahaayeen ay qariyaan. Bal adba!
Bal hadda sheekooyinkan, idinka oo iga raalli ah iga gura. Waxa la yidhi nin soo-galeeti ah oo bas la socday ayaa dirawalkii ku yidhi: “Marka aad bakhaarka hebel marayso ii jooji.” Waa maalmihii ay argaggixisadu ugu hadal-haynta badnayd. Markiiba rakaabkii baska ayaa ninkii haleelay. Ku-ye: “Oo bakhaarka hebel maba taqaannid? Haddaa xaggeed ka timid?” Su’aalo intay ku hafiyeen ayay la degeen oo saldhigga geeyeen.
Maalmihii diiwaan-gelinta ee 2008kii, ayuu baabuur Toyota ahi meel magaalada Wajaale ka yar baxsan oo Xaafado ah is-taagay. Cabbaar ayuu taagnaa. Wixii dumar iyo carruur xaafadda deggenaa ayaa isku xeeray. Badhna boolis ayay dooneen. Mar danbe ayaa la ogaaday in uu shixnad koontarabaan ah qaadayay.
Kun sheeko oo kale ayaynu marin karaynaa. Ma xeer baa diray? Maxaa dadka caynkaas ah loo xujaynayaa ee xeer iyo waxaan jirin loogu xajiimaynayaa?
Ammaankeenna iyo badbaadadeenna Ilaaha Maxamed samo ku uumay ayaa haya. Qof kasta oo reer Somaliland ka mid ahi waa heegan. Nabadgelyada dalkeennaa taallaa waxay salka ku haysaa soo-jeedka shacbiga reer Somaliland, iyada oo aan la yaraysan karayn kaalinta ma-dhaafaanka ah ee ay hanashada nabadda kaga jiraan ciidammada Qaranka ee: Booliska, Asluubta, Ciidanka Qaranka iyo ilaalada xeebuhuba.
Ma gunaanadkaygiyo gebegebada sheekada:
Raalli iga ahaada waan idin daaliyay e’. Waxa la yidhi odeygii maansayahanka iyo murti-dhaadhigaba ahaa ee Cali Dhuux ayaa beryihii danbe indho-beelay. Markaas ayaa lagu yidhi: “Cali Dhuuxow waa adigan indho-beelay, ee immika miyaanad gabaygii iska daynayn? Wuxu nimankii su’aashaa weydiiyay ugu jawaabay: “Xaggee ayaan ku daayaa immika ayaaban u indho- belay e’.”
Aniguna maanta halkaa Cali Dhuux taagnaa ayaan taaganahay oo immika ayaaban qoraalkii u shaqo-beelay ee xaggee ayaan ku daayaa.
Maxaa Siyaad Barre ku kellifay in uu samaysto xeerar iyo ciidan Nabad Sugideed? Maxamed Siyaad Barre markii uu taladii dalka kula wareegay qori caaradii wuxu tirtiray wax alle yaale wixii dimuqraadiyad iyo xorriyadba u adeegayay:
1. Dastuurkii Qaranka waa la tuuray,
2. Barlamaankii waa la kala diray,
3. Xukuumaddii waa la wada xidhay oo xabsiga ayaa loo taxaabay,
4. Xisbiyadii siyaasadeed iyo ururradii samo-falka oo dhanba albaabbada ayaa loo xidhay,
5. Madbacadihii waa lala wareegay iyo wixii wax lagu daabacayay oo dhanba,
6. Wargeysyadii dhammaantood waa la xaaraantimeeyay,
7. Wax la daawado, wax qoran, wax la dhegaysto oo dhanba waxa loo sameeyay Guddi Faaf-reeb oo eegta isla markaana hubisa waxa ku jira. Xataa waraaqaha caadiga ah ee dadku isu dirayo iyo cajaladaha waa la eegi jiray, la akhriyi jiray lana dhegaysan jiray,
8. Waxa la soo saaray Axdigii 1aad ee Kacaanka iyada oo muddo ka dibna la soo saaray Axdigii 2aad ee Kacaanka. Labadaa Axdi waxa ku sawirnaa oo astaan u ahaa: Gacan saran kitaab qouraan ah oo furan, qori AK ah iyo koofiyad bir ah oo tan millateriga ah. Astaantaasi waxay sheegaysay in uu Siyaad Barre ku dhaartay in uu tooganayo wixii ka hor yimaadda, waanu yeelay isaga oo weliba ka badbadiyay.
9. Waxa la xaaraantimeeyay in ay dadku kulmaan ama shiraan. Saddex qof wax ka badani meel ma ay wada joogsan jirin,
10. Waxa la dhisay Maxkamaddii Badbaadada ee ciddii denbiyadaa lagu helo la taagi lahaa,
11. Waxa la qoray xeerkii lagu qaadi lahaa oo ahaa Xeer Lambar: 54 oo dhigayay dil iyo hantida qofkaas oo lala wareego,
Waa markaas marka uu Maxamed Siyaad Barre u baahday in uu helo cid u soo dhegaysata wixii waxaa ka baxsan. Markaas ayuu bilaabmayaa: daba-galka, xuuraanka, dhegeysiga, dhega-dhegaynta iyo waxyaabaha la midka ah.
Maanta marka aynu dalkeenna eegno intaa uu Maxamed Siyaad Barre tirtiray oo dhan ayaa jirta. Waa xaalad kale oo ka duwan tii uu samaystay si uu u hawl-geliyo Ciidankii Nabad Sugidda ee halkaa maanta ay Soomaaliyi taallo dhigay.
Dhiilladan fiintu ka qaylisay ee maanta dalkeenna ka aloosan waxa u aabbo ah Golaha Wakiillada oo ay hor kacayaan Shir-guuddoonka iyo Guddi-hoosaadka Arrimaha Gudaha ee Xeerkan inagu sharciyaysay. Waa hubaal in ay taariikhdu magacyadooda xusi doonto meel gaar ahna ku qori doonto.
Aynu ku yar hakanno Golaha Wakiillada. Sida magacoodu sheegayo waa Wakiillo oo waxay masilaan dadweynihii soo doortay. Shacbiga ayay Golaha ugu jiraan oo ay Wakiillo ka yihiin. Sida ay iyagu u haystaan una aamminsan yihiin dantooda Golaha uguma jiraan. Ma doonayno Gole wakiillo ah oo xukuumadda jiq ku siiya oo ay taab la rogi weydo, isla markaana ma doonayno Gole Wakiillo ah oo xukuumadda jeebkeeda ku jira. Waxa loo baahan yahay laba Gole oo si togan oo Dastuuriya oo kala madax-bannaan u hawl-gala iyaga oo heshiis ah oo dal iyo dadba u adeegaya. Ilaahay ayaanu ka maqan gallay in ay bisad iyo jiir isku noqdaan, iyo in ay noqdaan laba isku lammaan danahooda u wada qadhaabta.
Xeerkan Sir-doonka Qaranka ee ma-hadhada reebay saacad laguma jirin dooddiisa sida looga-qaateenka laga hayo. Badanaa Golaha si loo fadhiisiyo dirqi iyo si fool adag ayaa lagu soo helaa “Quorum”-ka ama tirada ansixinta fadhiga, marka erey-bixintii shirarka ee SNM la raaco.
Golaheennii Wakiillada ee aynu ku soo dhabar-jabnay ma haynno. Waxay isku milmeen Xukuumaddii oo ay laba hawlood oo kala duwan ay leeyihiin. Bal u fiirsada xeerarka ay inagu jidaynayaan. Xukuumaddu wixii ay doonayso waa ay marsanaysaa. Madaarradii ayaa la inagaga qaadayaa cashuuro aan mid iyo laba ahayn oo aan sharciyaysnayn. Wixii ay Xukuumaddu doonto – xeer iyo xeer-darro – waa ay oggol yihiin.
Bal hadda u fiirsada Xeerkii la celiyay ee ‘Kootadii’ haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay. Waxa la ina barayaa in uu Madaxweynuhu arrintan oggolaaday, bal se ay Golaha Wakiilladu diideen. Madaxweynuhu wuxu doonayo Golaha Wakiillada wuu mariyaa, xeerkanna wuu marin lahaa haddii ay sidaasi jirto. Sidii Miisaaniyadda iyo Xeerka Sir-doonka sida fudud loogu mariyay, ayaa kan ‘kootada’ haweenka iyo dadka laga tirada badan yahayna loo marin lahaa.
Go’mmada ay Golaha Wakiilladu qaataan waxay ku qaataan dhowr iyo soddon cod. Waa kuwa ugu sarreeya sida codkii ay Miisaaniyaddi aanay ka doodin ku oggolaadeen. Waa Golaha Hay’ado aan xeerba lahayn oo aan biraysnayn oo aan sharciyaysnayn miisaaniyad u sii daayay ee odhan kari waayay: “Xeerkii lagu dhisay mee.” Miisaaniyadba ha u sii daayaan Hay’addaa oo sida warbaahinta lagu fidiyay weliba siddeed Wasaaradood wadartooda ka lacag badan. Waa TV-ga Qaranka. “Iyaba waa tabalaha adduun, taynu aragnaa.”
← Waraysi Boobe Yuusuf Ducaale 2013
Magacaabistaydii iyo Maagistaydii: Laba isku lammaanaa →